Fanasokajiana boaty fitehirizana - YiXing International Logistics (GuangDong) CO., LTD
Fanasokajiana boaty fitehirizana
Ny fiainantsika isan'andro dia tsy afaka mamela ny karazan'entana isan-karazany, mahazo ny fihetsika izay mitafy ankoatry ny fahazoana zavatra iray, ny endrika lehibe kokoa dia mitandrina ny hatsarana sy ny kolontsaina, mandray ny fomba izay anaovany azy koa ny fahasamihafana isan-karazany. Ny vokatra fitehirizana dia takiana amin'ny fampiasantsika isan'andro. Ny fivarotana Amazon koa dia mivarotra boaty fitehirizana maro karazana, ary malaza be ireo vokatra ireo. Miss He dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana boaty fitehirizana, boaty fitehirizana ary vokatra fitehirizana hafa. Satria manana fanantenana momba ny tombam-barotra amin'ny sehatra Amazon izy, dia nandany vola sy ezaka be tamin'ireny vokatra ireny. Ny orinasa Miss He dia any Shenzhen, nanokatra fivarotana an-trano ao amin'ny gara amerikanina Amazon, tato ho ato dia misy entana maro halefa any amin'ny trano fanatobiana entana any Etazonia, ka te-hahita orinasa mpamokatra lozisialy matihanina hanao Sino- Fitaterana amerikana.
Noho izany, Miss He dia nifandray tamin'ny tsipika manokana YiXing Global Logistics USA tamin'ny alàlan'ny fikarohana ny logistika manokana Sino-US amin'ny Internet, ary naka hevitra tamin'ny tranonkala momba ny vidin'ny kaontenera fandefasana any amin'ny FBA USA amin'ny alàlan'ny rivotra. Raha ny fahalalana ny serivisy ho an'ny mpanjifa Joanna dia nandamina serivisy ho an'i Miss He niaraka tamiko avy hatrany izy, ary nilaza taminay fa afaka manome serivisy mijanona iray toy ny famandrihana trano fitehirizan-tany Amazon izahay, fikarakarana ny mpanjifa, ny fadin-tseranana ary ny fandefasana azy. Nandinika haingana ny entana araka ny toe-javatra manokana an'ny Miss He ihany koa aho, ary nitory tamin'i Miss He ny vidiny rehetra. Rehefa avy nandinika andro maromaro aho dia nifandray tamiko indray i Miss He ary nangataka ny hanontany momba ny sidina akaiky indrindra, hanangona ny entana avy any Shenzhen mankany amin'ny trano fitahirizanay amin'ny andro iray ihany, ary rehefa vonona ny entana sy ny antontan-taratasin'i Miss rehetra dia afaka ny entana avy hatrany dia notaterina ary natolotra tamin'ny sidina mivantana nankany Etazonia.
Ny YiXing Global Logistics dia mifantoka amin'ny fitaterana fandefasana fandefasana entana manokana any Etazonia FBA, ary afaka manome anao fandefasana indroa mazava ho eo am-baravarana, rivotra avo roa heny ho an'ny varavarana, fanaterana voalohany FBA ary serivisy fijanonana hafa, mba hahafahan'ny sisintaninao e -mampiahiahy bebe kokoa ny lozisialy varotra.